‘सूदूरका अझै‌ तीन-चार ठाउँमा ल्याब राखेर परीक्षण गर्नुपर्छ, नत्र जाेखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्नँ’ – Health Post Nepal
२०७६ चैत २५ गते १७:३२
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् नारदमुनी राना। अहिले सुदूरपश्चिममा चार जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। जनताको मतबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा अहिले जनताको सुरक्षाका लागि के गरिरहेका छन् र केन्द्रमा अत्यावश्यक सामग्रीका लागि कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्? यही विषयमा केन्द्रित रहेर हेल्थपोष्ट नेपालका लागि यज्ञराज जोशीले सांसद रानासँग गरेको कुराकानी :
सुदूरपश्चिममा चार जनामा कोरोना देखिइसकेको अवस्थामा जनताको केन्द्रीय प्रतिनिधिको हैसियतले के गर्दै हुनुहुन्छ?
पछिल्ला दिनमा सुदूरपश्चिमको अवस्था निकै चिन्ताजनक छ। भारतबाट आएकाहरुबाट थप जोखिम भएको छ। चार जनामा कोराना संक्रमण देखिइसकेको अवस्थामा देशमै सुदूरपश्चिम सबैभन्दा खत्राको जोनमा छ।
भारत लगायत अन्य देशबाट आयका नागरिकहरू सुरुदेखि नै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन। सांसद्को हैसियतले मैले सुदू्रपश्चिमको हकमा अत्यावश्यक सामग्रीका लागि केन्द्रीय सरकारसँग बेला–बेला छलफल गरिरहेको हुन्छु। अस्ति चाइनाबाट परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री आउँदा हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुदूरपश्चिममा सामग्री पठाउन आग्रह गरेका थियौं। सरकारले हाम्रो आग्रह अनुरुपनै सुदूरपश्चिमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहेको छ।
हाम्रो क्षेत्रमा भयावह अवस्था भएकाले ¥यापिड टेस्टका लागि हामीले अनुरोध गरेउ र अहिले काठमाडौंबाट टोली गएर आज (२५ गते) बाट मान्छेको घर–घरमा गएर टेस्ट गरिरहेको छ। त्यसले हन्ड्रेड प्रशेन्ट रिजल्ट नदिए पनि ८०/९० प्रशेन्ट रिजल्ट दिन्छ। यत्तिले मात्रै सिंगो सुदूरपश्चिमलाई अहिले पनि पुगिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले थप टेस्ट गर्ने मेसिन चाहियो भनेर हामीले कुरा गरिरहेका छौं।
अर्को कुरा दैनिक ज्यालादारी गर्ने विपन्न परिवार अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ। तिनिहरूका लागि पनि केन्द्रीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत तथ्याङ्क संकल गर्ने कार्य भइरहेको छ। सबै ठाउँमा प्रयाप्त राहत वितरणको कार्य पनि स्थानीय तह मार्फत नै अगाडि बढेको छ। बाहिरबाट आएका जनता बस, रिक्सा चढेर गाउँ–गाउँ पुगेको अवस्था छ। कसैमा संक्रमण भए त्यसबाट जोखिम फैलिने चिन्ता उत्तिकै छ। त्यसैले जनता पनि सचेत रहनुपर्छ। सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ।
बालि भित्र्याउने बेला भएकाले केही डिस्टेन्ट मेन्टेन गरेर बालि भित्र्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा भएको छ। यसमा प्रशासन पनि सकरात्मक छ। प्रदेशमा चार जनामा कोरोना देखिएकोले सरकारले निर्धारण गरेको दूरीमा रहेर सावधानी पूर्वक किसानले पनि काम गर्नुपर्छ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा भएको ल्यावमा महत्वपूर्ण टेस्टिङ मेसिनहरू छन्। मैले दुई दिन पहिले मात्रै ति मेसिन सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका दुई स्थानमा राखेर थप परीक्षण थालौं भनेर सरकारसँग भनेको छु। सुदूरपश्चिमका तीन/चार ठाउँबाट जाँच्न सुरु गरिएन भने त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने जोखिम उत्तिकै छ।
अहिलेसम्म दुई लाख मान्छे सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाका भएर नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ। कसैको तथ्याङ्क संकलन भएको छ। कोही चोर बाटो प्रयोग गरेर आएका छन्। त्यसका लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ। नागरिक सचेत हुनुपर्छ। मैले हिजो मात्रै केन्द्रीय सरकारसँग थप उपकरणका लागि पहल गरेको छु। त्यसरी बाहिरबाट आएका जनताहरूले यो सुरक्षा मेरो परिवार, मेरो समाज र मेरै लागि हो भन्ने बुझेर आफै सम्पर्कका आइदिएको भए सरकारलाई सहज हुने थियो।
प्रदेश सरकारसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ?
स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको छ। विहान प्रमुख जिल्ला अधिकारी र बेलुका प्रदेश प्रमुखसँग त्यहाँको अवस्था, तयारी लगायत केन्द्रबाट हामीले खेल्नु पर्ने भूमिकाका विषयमा छलफल भइरहेको छ। दुईदेखि तीन हप्तासम्म बाहिरबाट आएका दाजुभाईले सजक भएर बसिदिए सरकारलाई कोरोनासँग लड्न सहज हुने थियो।
उपचार र परिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किट् लगायत आवश्यक उपकरण केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको छ। केन्द्र सरकारले परीक्षण र उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी प्रदेश सरकारको जिम्मामा उपकरण पठाएको हो। अपुग भयो भने फेरि पनि हामी पठाउन लगाउँछौं। प्रदेश सरकारले पनि बलियो तयारी गरेको देखिन्छ। यो सबैको साझा लडाई भएको हुनाले कुनै पार्टी, दल वा सरकार नभनी साझा रुपमा एक भएर कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्छ। सबै एक भएर लाग्यौ भने यस महामारीविरुद्ध लड्न सक्छौं।
प्रदेशमा बाहिरबाट कति जना आए तपाइलाई त्यस्तो केही डाटा छ?
हप्ता दिन अघिसम्म एक लाख ८० हजार सुदूपश्चिमका विभिन्न नाका भएर मान्छेहरू नेपाल भित्रिएको भन्ने डाटा मलाई प्राप्त भएको थियो। अहिले पनि केही नेपालीहरू भारत पट्टीको क्वारेन्टाइनमा छन्। धार्चुला, पलिया तिरका भारतीय क्वारेन्टाइनमा पनि केही नेपालीहरू छन्। केही मान्छेहरू हिडेर अबैध बाटो प्रयोग गरेर पनि नेपाल भित्रिएका छन्। तिनीहरूको डाटा छैन। यसरी हेर्दा दुई लाखसम्म सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्र भएर मानिसहरू भारतबाट नेपाल भित्रिएको अनुमान गरिएको छ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सकको अवस्था कस्तो छ, सामानको उपलब्धता के छ?
खासगरी विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ। त्यसका लागि र्‍यापिट टेस्टको एउटा टोली सुदूरपश्चिम पुगेको छ। मंगलबारबाट उनीहरूले काम पनि थालिसकेका छन्। सेती प्रादेसिक अस्पतालका चिकित्सकहरूले नै एउटा टोली बनाएर कवर्डहलमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा खटिएर काम गरिरहेका छन्। ल्याव टेस्टका लागि स्पेसल कोरोना सम्बन्धि जाँच गर्न चिकित्सको टोली काठमाडौंबाट सुदूरपश्चि गएको छ। अहिले त्यो टोलीले राम्रो काम गरिरहेको छ। त्यसका लागि म सम्पूर्ण चिकित्सक मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले देखिएका संक्रमितको उपचारका लागि चिकित्सकको संख्या प्रयाप्त नै छ। तर, भोली संक्रमितको संख्या थपियो भने त्यो प्रयाप्त नहुँन सक्छ। र, चिकित्सकका लागि आवश्यक पर्ने थप सामग्रीका लागि पनि म केन्द्रीय सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छु।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सामग्री र चिकित्सकको अवस्था राम्रो भए पनि ग्रामिण भेगतिर समस्या छ, त्यसमा पनि तपाईको ध्यान पुगे थप राम्रो र प्रभावकारी हुन्थ्यो होला?
तपाईंले भनेको कुरासँग म सहमत छु। ग्रामिण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सामग्रीको अभाव छ। र, तिनीहरूसँग चेक गर्ने क्षेमता पनि छैन। यसमा जिल्लाले के गरिरहेको छ भनेर मैले बुझ्दा प्रदेश सरकारले शंका लागेका विरामीलाई क्वारेन्टाइनमा राखी धनगढी ल्याएर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो। जिल्लासम्म पुर्‍याउने वातावरण बनाउनु पर्‍यो।
धनगढीमा एक घन्टामा सय जनाको परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यसैले विलम्ब नगरी जोखिमयुक्त विरामीको परीक्षणको प्रवन्ध गरिहाल्नुपर्छ। सुदूरपश्चिमको जुनसुकै ठाउँबाट पनि बढीमा नौ घण्टामा धनगढी पुर्‍याउन सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
कोरोना रोकथाम उच्च स्तरीय समितिका संयोजक रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलसँग कुरा गरेर टियुमा भएका ल्यावका उपकरण पनि एउटा डोटीमा राख्ने र अर्को बाजुरातिर राख्न पाइयो भने पहाडी जिल्लातिर देखिएका यो रोगसँग सम्बन्धित शंका लागेका केसहरूमा त्यतै उपचार गर्न मिल्थ्यो भनिरहेको छु।
धनगढी बाहिर क्वारेन्टाइनमा राखेकाहरूको अवस्था नाजुक रहेको अनि त्यहाँ चिकित्सक पनि जान नसकेको अवस्था छ, यसबारे तपाईँलाई के थाहा छ?
क्वारेन्टाइनमा राखेका सबै बिरामीलाई कोरोना छ भन्न सकिँदैन। किन भने जाँच गरेपछि मात्र भए नभएको थाहा हुने हो। गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले स्थानीयका क्वारेन्टाइनमा राखेका मध्ये कोही संकास्पद देखिए भने मैले अघिनै भने झै तुरुन्त धनगढी सेती प्रादेसिक अस्पतालमा पठाउनु पर्‍यो। धनगढीको शुभम् होटेलमा त्यस्ता विरामीको उपचारका लागि केही विशेष कक्ष निर्माण गरिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षित उपचार भइरहेको छ। कसैलाई कभर्डहलको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। नेगेटिभ देखिएकाहरूलाई घर पठाउने काम भइरहेको छ।
हामीसँग साधन स्रोत अप्रयाप्त छ। यसको परिक्षणका लागि रगतबाट मात्र थहा नभई स्वाव नै लिनु पर्ने भएकाले चिकित्सकहरूलाई पनि सुरक्षीत राख्नु प¥यो। यस्तो बेला सबैले सम्यम् भएर सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। टियुको उपकरणका लागि स्वास्थ्यले अनुरोध ग¥यो भने शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको टियुको ल्यापबाट तत्काल लिन मिल्ने खालको कुरा अगाडि बढाएको छु। यो दुई मन्त्रालय र सरकारको बिचको कुरा भएकाले एक दुई दिनमा यस विषयमा टुंगो लाग्छ होला।
गहुँबाली भित्र्याउने सिजन छ, किसानलाई कसरी खेतबारीमा पठाउने भन्ने विषयमा केही सोचिएको पाउनुभएको छ?
यो विषयमा मेरो सिडियो साप र मुख्य मन्त्रीसँग कुरा भएको छ। बालि भित्र्याउने बेला भएकाले केही डिस्टेन्ट मेन्टेन गरेर बालि भित्र्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा भएको छ। यसमा प्रशासन पनि सकरात्मक छ। प्रदेशमा चार जनामा कोरोना देखिएकोले सरकारले निर्धारण गरेको दूरीमा रहेर सावधानी पूर्वक किसानले पनि काम गर्नुपर्छ।